AUGI Mara ayaa soo bandhigtay fiidiyoow fiidiyow oo sharaxaya sifooyinka cusub ee AutoCAD 2009 oo loo yaqaan Raptor illaa iyo hadda lagu dhaleeceeyey qiyaasta ilaha khayraadka u baahan, inkastoo ay arkeen ficilada fiidiyooga lagu sawirayo in uunan ahayn mid qurxin.
Ma ahan fiidiyowyo xun, sababtoo ah inkastoo codku ku qoran yahay Ingiriis, waxaad baran kartaa daqiiqado yar oo ah sifooyinka adiga oo aan nacas la socon.
Kuwani waa fiidiyowyada 13:
Tani adag seconds 45 oo kaliya muujinaysaa shaashadda cusub, halka sheeko wuxuu isku dayaa inuu xaq yahay waxa AutoDesk raadinaya ... qaababka cusub in ay kordhiyaan wax soo saarka, si loo hagaajiyo maamulka baararka menu ...
Waxaa loo qoondeeyey sharaxaad ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan ee maqaarku u shaqeeyo, taas oo ku taal geeska bidixda sare. Waxaa macquul ah in la raadiyo amarro, kaas oo amarrada u dhigma qoraalka qoraalka la soo bandhigay; haddii "xariiq" la qoro, dhammaan amarrada ku jira qoraalkaan ayaa muuqda (xline, mline, iwm)
Tani waxay sharraxeysaa badhannada kale ee ku yaalla midigta warqadda cas ee A, oo lagu sharraxay fiidiyow hore. Si xiiso leh, mawduucaan, gujisid midigta waxay uqalmaysaa fursadda ah in la badhxo badhamada, sida sida baararka horey loo yaqaan loo yeeri karo. Sidaa darteed haddii aad rabto inaad jilacdo Sawirada iyo Beddelida baararka, waxaad ku dhejin kartaa bararkan yar yar kuna dhaqaajiya halkaa.
Sharaxaad ka bixinayaan hawlgalkan weyn ee hareeraheeda, taas oo gaar ahaan aanan jeclayn. Oo daawashada video aad ka arki kartaa in ay tahay arrin waxtar leh oo wax ku ool ah, laakiin kuwa doonaya in ay guri degdeg ah ka dhigi waa xoogaa wax aad looga xumaado, maxaa yeelay ka soo saareen bannaan badan shaqada marka laga reebo, tallaabo kasta oo kor u daaqad macnaha leh qaababka badan oo aan mashquulin AutoCAD, (waayo, samee qorshooyin, maaha inaad sameyso gabayo). Ugu yaraan fiidiyowga ayaa muujinaya in loo jiidi karo dhinaca kale, waana la fududayn karaa.
Fiidiyowgaan oo dhan waa la sharaxay, waxaa habboon in la arko, sababtoo ah maaha wax ka badan wixii aan horey u lahaan jirey, iyada oo kala duwanaansho ah in badhkoodu ka badan yahay "geek" oo hadda waxaa jira badhanka zoom / pan. Sidoo kale waxaa jira badhanka lagu dhaqaajinayo habyaalada garabada ee noocyada dhow.
Guryaha Degdegga ah
Fiidiyowkani wuxuu sharxayaa waxa ay ku sameeyeen miiska dhinacaas oo aan ogeyn sida hanti-guri. Hadda waa jadwal u muuqda ama baabi'i kara oo kaliya marka loo baahdo, xitaa waxaad xallin kartaa nooca beeraha iyo inta badan ee aan dooneyno inay halkaas joogaan. Waxay iigu muuqataa mid ka mid ah isbeddelka ugu wanaagsan ee AutoCAD 2009, inkastoo ay hoos u dhacdo, sababtoo ah shuruudaha "daaqad xaddidan" waa in la awoodi karo in loo qaabeeyo noocyada kala duwan ee amarrada.
Muujinta Quick View
Tani waxay muujinaysaa hagaajinta hagaajinta laydhka ... inkastoo qofna uusan ku caawinin haddii aadan garanaynin sida loo abuuro.
Sawirrada Quick View
Hagaag, fiiri, waxay yihiin waxbarasho aad u wanaagsan in aan lumino version cusub ... ah!, Iyo maya, ma sharaxo sida loo jajabiyo haddii ay tahay waxa aad raadineysay.
Post Previous«Previous Shirkii sanadlaha ee Bentley, oo leh qaab cusub
Post Next Dadweynaha: faa'iido darro ee 7 yaabab caadi ahNext »
5 Jawaabo "13 Videos from AutoCAD 2009"
autocad kale ma lahayn dhibaatooyin aad u badan oo lagu sawirayo diyaarad, hadda waxaan u arkaa inay sii deyn karto
j. guadalupe ramirez isagu wuxuu leeyahay:
content video Aad u fiican yahay in oo dhan waa on AUTOCAD IN VERSION WAX KA AUTOCAD oo hadha 2009 waa HAMBALYO ugu
Sergio Carpio isagu wuxuu leeyahay:
Si aad u wanaagsan ... Anigu ma aan helin sharaxaad cad oo ah AutoCAD 2009 halkan.
Hambalyo ... ..
Thanks Ruben, inkasta oo aan aqbalo in boggagaaga uu ku fiicnaado meelaynta raadinta eraygan isla midka ah ... iyo kaas oo aan ku qanacsanahay xiriirkaaga oo weliba iga dhigtay taraafikada.
salaan, iyo soo gudbin blog-kaaga
Hambalyo udir post this. About AutoCAD 2009 ma jiro qof guuleysta, tayada labadaba iyo macluumaadka.